Ahoana ny fampitahana ny fifandraisana amin'ny mailaka amin'ny fifamatorana ara-tsosialy | Martech Zone
Ahoana ny fampitahana ny fifandraisana amin'ny mailaka amin'ny fampandraisana andraikitra ara-tsosialy
Alahady, Jona 14, 2015 Asabotsy, Jona 13, 2015 Douglas Karr
Raha vantany vao hitako mifampitaha amin'ny ampiasaina amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra amin'ny marketing, somary somary somasy aho. izany infographic eto ambany avy amin'ny Devesh Design dia miasa tsara amin'ny fametrahana amin'ny fomba fijery ny filan'ny mpanjifa mampiasa mailaka ho an'ny orinasany. Tsy manana ahiahy momba ny herin'ny mailaka aho ary ny fahaizany a manosika marketing teknolojia hampirisihana ny mpamandrika handray andraikitra. Mety izany… ary tokony samy hanao izany ny tsirairay.
Na izany aza, ny fampitahana ny mailaka sy ny sosialy dia paoma amin'ny voasary. Ny media sosialy dia manana tombony maro hafa ankoatry ny fikitihana doka sy fanovana. Mahafinaritra ny media sosialy amin'ny fandrenesana ny hafatrao. Ka andao hampiasa ny ohatra ao amin'ny infographic etsy ambany. Mandefa mailaka ho an'ny 1,000 amin'ireo mpanjifanao ianao ary vokatr'izany dia olona 202 no manokatra izany mailaka izany ary 33 amin'izy ireo no manindry izany.
Andao zaraintsika amin'ny media sosialy izao lahatsoratra izao izay misy mpanaraka anao 1,000 na amin'ny Twitter na Facebook. Araka ny tabilao, angamba olona 10 no nahita an'io ary 3 no nanindry azy. Mampihoron-koditra tokoa izany?
Tsia, tsy mahatsiravina izany. Ity no antony. Ny atiny izay nasandratrao tamin'ny alàlan'ny fiaraha-monina dia nozarain'ny vitsivitsy tamin'ireny olona ireny. Ireo olona vitsy ireo dia manana mpanjohy maherin'ny 20,000. Ary ny mpanaraka azy ireo dia mahatratra mpanaraka maherin'ny 100,000. Ary mahatratra an-tapitrisany ny mpanaraka azy ireo. Tsy nisy nanokatra ny mailaka nataonao mihoatra ny indray mandeha ary tsy fahita firy fa nisy nandefa ilay mailaka tamin'ny namana iray. Saingy nitohy nandritra ny volana maro ny onjan'ny asa sosialy.
Manana lahatsoratra izahay Martech Zone izany dia mbola mahazo fomba fijery an'arivony sy tsindry an-jatony taona maro taorian'ny nanoratanay azy ireo noho ny media sosialy. Tsy lazaina intsony fa ireo fizarana ara-tsosialy ireo dia nitarika olona hafa hanoratra lahatsoratra sy hanondroana anay, izay nahatonga ny fitomboan'ny laharan'ny milina fikarohana, izay nahatonga ny fifamoivoizana fikarohana voajanahary ambony kokoa, izay nanjary tsindry sy fiovam-po bebe kokoa.
Infographic tsara izay manohana ny hery mailaka tsy mampino. Fa ny fihenan-tsasatra amin'ny haino aman-jery sosialy dia hadisoana lehibe ho an'ny fikambanana rehetra. Ary tsy miresaka momba ny fiantraikany akory mihoatra ny kitika sy fiovam-po isika. Manolotra fotoana ahafahana manangana fahefana eo imasom-bahoaka ny fiarahamonina, hahazoana fampahalalana mahatalanjona amin'ny alàlan'ny asa fanompoana lehibe ataon'ny mpanjifa, ary ny virtoaly amin'ny fotoana tena izy izay diso tanteraka ny sambo ny mailaka.
Tags: Devesh Designfandraisana an-tanana amin'ny mailakamailaka mifanohitra amin'ny sosialyfiaraha-moninamifampitaha amin'ny
Bitrix24: antsy miaramila soisa ho an'ny fiaraha-miasa orinasa
Ahoana ny tombotsoan'ny orinasanao amin'ny varotra media sosialy